Kodiarana malefaka 8 kodiarana malefaka valizy: lamba 7302, Sina kodiarana malefaka 8 kodiarana malemy paosy ： mpanamboatra lamba, mpamatsy, orinasa - Phu Ly Bao Co. Ltd
Lightest 8 wheels soft cabin Suitcase：Fabric 7302
fivezivezena maoderina: Ity Kenneth Cole REACTION sophie nylon 15. Kitapo solosaina finday 0-Inch dia manisy paosy sy fitaovana enti-miasa maromaro hitazomana ny entana ilaina amin'ny dia rehetra. Manasaha tantana ambony mora raisina. Ny any ivelany dia misy tontonana miverina amin'ny bolongana, tionelina trolley mba hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny kitapom-paosin-tànana miendrika trolley ho an'ny tanana maimaim-poana, ary ny fehin-tsoroka matevina azo ahitsy.
compartments voalamina: efamira fandaminana gusset eo aloha dia misy flap voaaro RFID ambonin 'ny paosy fanampin-javatra, paosy fametahana zipper feno, lavarangana penina ary paosy malalaka misokatra. Ny efi-trano lehibe eo aloha dia misy paosy fisaka vita amin'ny padded, paosy misokatra roa ary efitrano hitazomana entana ilaina hafa. Ny tarehy ery ambony ery ambony dia misy paosy manafina zippered miafina mba hitahirizana sy hiarovana ny entana sarobidy.
Lightest 8 wheels soft cabin Suitcase：Fabric 7301